IINGCAMANGO EZINGAMA-27 EZIBOMVU ZEKHITSHI (IIKHABHATHI KUNYE NEMIFANEKISO YOKUHOMBISA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iingcamango ezingama-27 eziBomvu zeKhitshi (iikhabhathi kunye neMifanekiso yokuhombisa)
Wamkelekile kwigalari yethu yeengcinga ezibomvu zasekhitshini. Umbala obomvu unomdla kumdla kwaye unxulunyaniswa neemvakalelo ezinzulu kunye neemvakalelo. Njengento evuselelayo, obomvu yeyona nto ishushu kwimibala efudumeleyo enesakhono sokuvuselela incoko elungileyo, yokukhuthaza kunye nokwandisa umdla wokutya kunye nokuqaqambisa indawo yokusebenza yonke. Jonga indlela ebomvu enokusetyenziselwa ngayo iikhabhathi zasekhitshini ezibomvu, ukuhombisa, iziqithi, izitulo kunye nezitulo zebar ukwenza indawo yokupheka enomtsalane.
izimvo zesipho somtshato kwimitshato yesibini
Umbala wamandla kunye nombala wothando, umbala obomvu ophefumlelweyo ekhitshini lwanamhlanje kumfanekiso ongentla, utsalela ingqalelo kwiikhabhathi ze-lacquer kwindawo ephezulu yokuhombisa. Ezi khabhathi zibomvu zibusebenza kakuhle ngakwindawo yokutyela engwevu, ngumphezulu womphambili womgangatho oqinileyo, umpompo wekhitshi ongenazintsimbi kunye nezixhobo zokusebenza, izitulo zebar chrome zokugqibezela, izinto zesinyithi zokukhanyisa zesinyithi kunye nezinye izixhobo. Umgangatho ophakathi we-laminate floor unika ibhalansi eyongezelelweyo yokudala indawo emanyeneyo yesitayile.
Umhombiso oBomvu weKhitshi
Ingqokelela yethu yoyilo lwesitayile zizimvo ezibomvu zeRED ezinokuthi zongeze nayiphi na indawo yekhitshi. Izifundo zibonisa ukuba umbala obomvu ngowona ushushu kwimibala efudumeleyo kunye nombala ongqamileyo omele uthando, uthando, ulonwabo kunye namandla ukubiza ezimbalwa. Ubomvu buvusa amandla ethu omzimba, buvuse iimvakalelo zethu, buvuselele umdla wokutya kwaye busishukumisele ukuba sithathe inyathelo.
Ukulungelelanisa umbala obomvu onesibindi kwiindlela ezahlukeneyo zoyilo ekhitshini, zihlala zidityaniswa nemibala eyahlukeneyo yemibala engathathi hlangothi njengegrey, emhlophe, emnyama nomdaka. Umbala obomvu unokuxutywa negolide, luhlaza, fuscia kunye nomthubi kwisikimu sombala we-eclectic.
Iingcango zekhabhathi ezifakwe kwisakhiwo ezibomvu zangoku kunye nezabomvu zilula kodwa zinesitayile. IiLaminates zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokugqiba kunye nesheens. Kukhetho olufanelekileyo kwabo balaziyo uhlahlo-lwabiwo mali kodwa banqwenela ikhitshi elinobunkunkqele.
I-backsplash yekhitshi inyusa isitayile yoyilo; kwaye ngokubonisa i-backsplash ebomvu, iyandisa imfudumalo kunye ne-vibe ehlaziyayo.
Udonga lwe-aksent ebomvu okanye udonga lwento, lunokubonelela ngemvelaphi ebukhali kunye nombala obonakalayo owenza ukuba kugxilwe ekujongeni kwaye uvumele ezinye iziqwenga zefanitshala, iikhabhathi, izixhobo kunye nezixhobo zokusebenza ukuba zivele.
Uyilo lwekhitshi yesiqhelo kunye neklasikhi zihlala zibandakanya imibala eyahlukeneyo ebomvu ukuze uncome iskim yoyilo kunye nenhle yoyilo.
Izimvo zoyilo lwangoku kunye nolwanamhlanje lwekhitshi olubandakanya iikhabhathi zomthi, ifanitshala kunye nophahla lomthi onzima zenza indawo entle, efudumeleyo neyamkelekileyo.
Indawo ephambili enesitayile ebomvu ebomvu njengesiqithi inokukhulisa indawo yokusebenza kwaye itshintshe inkangeleko yekhitshi liphela; ngelixa ugcina ibhalansi kwaye ugcina isitayile segumbi.
Ukufikelela kubomvu kunokuba sisiteyitimenti esilula, kodwa yeyona ndlela ilula yokongeza umbala omncinci oshushu kwaye uvuselele inqanaba eliphezulu lamandla ngaphandle kokudinwa. Yenziwe ngendwangu yendlu, izitya zasekhitshini kunye nedinala.
Olu khetho lulandelayo lwezikim zekhitshi oluqhelekileyo luya kukukhuthaza ukuba uzame ulinge kwaye udlale ngemibala eyahlukeneyo yombala obomvu. Iya kukunceda ube nomfanekiso-ngqondweni wendlela yokudibanisa umbala obomvu ofudumeleyo kunye nokwenza uyilo lwakho olukhethekileyo kunye nesitayile sendawo yoyilo.
Le khitshi yendabuko yenzelwe ukusebenzisa iikhabhathi ezibomvu zase China zidityaniswe nekhabhathi yethoni ephakanyisiweyo yephaneli yekhabhathi ene-granite top top efikelela kwikhawuntara enkulu yedinning. Ipateni yokubuyela umva kwethayile kunye nommandla wombhoxo wenza iskim yoyilo esibomvu. Iiplanga eziqinileyo zokwakheka kwesibane esibhakabhakeni, ukutyibilika kweenkuni kunye nokukhanya okujingayo okufudumeleyo kufudumeza eli khitshi libutofotofo.
Beka emgceni omhlophe, eli khitshi linobunkunkqele obomvu-oqaqambileyo ogqityiweyo ogqityiweyo wekhabhathi yeplanga yeplati edityaniswe nekhawuntari emhlophe yaseCorian emhlophe kunye neplastikhi yethayile ebuyela umva. Umgangatho omhlophe we-ceramic tile, izitulo zokutyela, itafile yokutyela ngeglasi, izixhobo zentsimbi ezingenasici kunye nezibane ezihonjisiweyo zeentsiba zibonelela ngokulingana kwesi sikimu sekhitshi nesimanje.
Isitayile se-Sleek saseYurophu esinepaneli yekhabhathi kwiVenetian ebomvu yokuhombisa ephezulu edityaniswe nekhabhathi zesilivere-ngwevu zokugqiba matt zibonelela ngokusebenza okuhle kunye nembonakalo ehlengahlengisiweyo. I-mosaic epheleleyo ye-backsplash yindawo yokupheka ibonisa indawo ekugxilwe kuyo kwaye idala udonga lokugqamisa. Izixhobo zensimbi ezingenasici, izixhobo zokukhanyisa zale mihla, iithayile zekherayile kunye nomthamo omnyama wegranite ubonakalisa isitayile esiqhelekileyo saseYurophu.
Iindonga zemibala yaseBurgundy? Jonga ngokusondeleyo kwaye uyakuwuqaphela umgangatho ophakamileyo ophakamileyo we-lacquer flat panel cabinetry. Iskimu sokuyila sanamhlanje esibonisa imiphezulu yeetafile zegranite ezingwevu zesiqithi sakusasa esineebhari esenza ukuba isikhululo sokulungiselela kunye nendawo yokutyela ihluke ngokucacileyo kwikhabhathi ejikelezileyo. Ukufezekisa umnqweno ofanelekileyo wangoku, izixhobo zentsimbi ezingenasici, iintsika kunye nenkxaso yesiqithi zafakwa. Izinto zokubopha ezibomvu zegazi kwizitulo zebar zibopha yonke inkqubo yoyilo.
Eli khitshi lale mihla linombala obomvu ocacileyo waseVenetian ophakamileyo osisithabazi sekhabhathi kwabo bakhetha umthunzi weskimu sombala omdaka ngombala obomvu. I-countertop ye-Beige granite isebenza ngokubambisana kunye nombala omnyama omnyama kwiibhodi zebhodi, i-cornice, i-plailing drop and stools. Isilingi emhlophe kunye neendonga zibonelela ngemvelaphi egqibeleleyo, isenza ikhabhinethi ibonakale ngakumbi. Izixhobo zensimbi ezingenasici zizinto ezikhethileyo ezikhethileyo zoyilo lwekhitshi.
Iphaneli yekhabhathi ebomvu ebomvu ebomvu ebomvu lukhetho oluqaqambileyo kule khitshi ye-chic kunye nemodish. Umbala obomvu ngokufuthi wawunxitywa kuphela ngabantu abazizityebi kwaye waziwa njengombala wothando. Lo mbala ubomvu ubomvu kunye ne-tinge eluhlaza okwesibhakabhaka udibanisa kakuhle kunye ne-black Corian countertop kunye nezixhobo zensimbi ezingenasici. Iithayile zeceramic beige zomgangatho kunye nemilinganiselo yokubuyela umva kwisikimu sombala esibonelela ngombono omtsha nowangoku.
Uyilo lwekhitshi lwesitayile segali lubonisa ikhabinethi yanamhlanje kunye nesitayile. Ezi khabhathi zineplantshi ebomvu ebomvu egudileyo eneebhantshi zeplanti ebomvu enesiphatho sokurhuqa i-nickel ejikelezayo, imiphezulu yeetafile yentsimbi kunye nophahla lwenkuni oluphakathi ludibanisa ubuhle obutofotofo kunye nezibonelelo zokusebenza ezibalaseleyo zolu luyilo lwasekhitshini. I-mosaic backsplash entle ibonakalisa imibala eyahlukeneyo ebomvu nebomvu yegolide ukuzoba kunye yonke imibala.
Ezi sleek, umgangatho ukuya eluphahleni obomvu oqaqambileyo ophezulu-acrylic acwecwe-iphaneli yekhabhathi yonyusa ifuthe lokubonwa kolu luhlobo luqhelekileyo lwe-U-imilo yekhitshi yoyilo. Umdlalo wemibala njengoko ubonwe kwikhabhathi kunye nomgangatho omhlophe wokuphakama komphezulu uhambelana nezixhobo zentsimbi ezingenasinxibo kwaye zenziwe zingasebenzi ziindonga ezimhlophe kunye nomgangatho okhanyayo weplanga.
Isitayela sendabuko ekhitshini eliphefumlelweyo linomthi we-cherry waseBrazil osetyenziswe kwikhabhinethi kunye ne-flooring enika indawo efudumeleyo kunye neyobushushu. Ezi khabhathi zekhitshi eziphakanyisiweyo kunye nesiqithi sinee-countertop ezingwevu ezifakwe kwizinto zensimbi ezingenasici ezilinganisela iskimu yoyilo.
Umbala obomvu kuthiwa ukwenza ulambile kwaye wandise ukutya kwakho. Isikimu sombala obomvu wetamato kule khitshi lukhetho olufanelekileyo kwabo bathanda ukutya nakwabo banomdla wokupheka. Umbala ongathathi hlangothi wecwecwe elingwevu elingwevu, iikhabhathi zephepha ezingwevu kunye nomqolo obuyela umva, iiglasi ezinekhenkethi ezishenxisa iikhabhathi zepaneli zodonga, ukukhanya okukhanya okutyibilikayo kwamatye endalo kunye nezixhobo zentsimbi ezingenanto ezingenisa ikhitshi elinamandla.
Nyusa ubushushu kule khitshi ye-chic kunye nefashoni enegazi elibomvu eliqaqambileyo likhabhathi zepaneli ezicociweyo eziphethe izibambo ze-chrome ezidityanisiweyo kunye ne-countertop emhlophe. I-nook encinci yesidlo sakusasa, udonga olunethayile kunye ne-backsplash zisebenza kakuhle kunye kule ndawo incinci iyenza indawo ethambileyo yokulungiselela, ukupheka kunye nokutya.
Le meko yoyilo lobugcisa ikhitshi ilungele indawo encinci kodwa kufuneka yenze ingxelo iyodwa. Isilingi emhlophe, iindonga kunye nomgangatho ziindawo ezintle zangasemva zale ndawo inesitayile. I-peninsula eyakhelweyo eyenziwe ngokwezifiso kwi-injini yomlilo ebomvu yenza indawo yokusebenza kunye nokuvuselela indawo ephambili. I-countertop emhlophe, izixhobo zensimbi ezingenasici, izitulo zebar ezimnyama kunye nekhawuntara yokutya ephakanyisiweyo kugxininisa isikimu sombala.
Imhlophe kunye nezimvi yimibala egqibeleleyo yokudityaniswa nobomvu- le yimibala yeklasikhi yombala, kwaye ilungile kwisikimu sombala wekhitshi. Ukuchukumisa umbala otyheli, u-apile oluhlaza kunye nomnyama ngemibala eqaqambileyo kusebenza ngokuchanekileyo kunye nesikimu. Itafile yensimbi engenasinxibo kwesi siqithi ilungele umpheki owakhelweyo ngaphakathi kunye netafile yokutyela eqhotyoshelweyo iyasebenza.
Uyilo lwekhitshi lwe-U olubonisa enye indlela yokubonisa ifuthe elifanayo lombala obomvu wegazi. Ezi khabhathi zigqityiweyo zecloss gloss lacquer zigqibile ikhabethe, kunye ne-chrome e-polated plated pulls handles kunye nomgangatho omnyama oya kunika ikhitshi lakho isibheno esihamba phambili.
Le khitshi emile okwe-U ibonisa enye imbono yokuba nesibindi somthunzi owomeleleyo onje ngetomato ebomvu ecekeceke ukubuyela umva ngumpheki kunye nendawo yokulungiselela. Iphaneli yekhabhathi emhlophe ethe tyaba kunye nokukhanya kwethayile ekhanyayo kudityaniswe nomphezulu omnyama ongaphezulu wee-countertop kunye ne-baseboard ziyindibaniselwano efanelekileyo ukuvumela ubukhulu bomvu bume. Izimvo zasekhitshini elibomvu ezisebenzisa umbala obomvu nomhlophe ziyindibaniselwano eyaziwayo yemibala enika iziphumo ezonelisayo.
Nanku umxholo otshisayo obomvu oshushu: i-lacquer ephezulu-gloss lacquer flat panel cabinetry, edityaniswe ne-stainless steel countertop kunye ne-backsplash. Iindonga ezikhanyayo ezingathathi hlangothi kunye ne-flooring yindawo efanelekileyo yangemva eyenza ezi khabhinethi zibomvu. I-countertop emhlophe yeCorian yesiqithi sasekhitshini, izixhobo zentsimbi ezingenasici, izixhobo zokubamba kunye nezixhobo ezigqibezela uyilo lonke.
Isikimu sombala oBomvu, oMhlophe noMnyama siphefumlele ikhitshi yemodish egazini ebomvu ebomvu, ipaneli yekhabhathi ethe tyaba kwisiphelo esine-gloss elaminethiweyo, umva wophahla olumhlophe kunye neendonga, ukutyibilika kwethayile ye-ceramic emnyama kunye nejet yetheyitile emnyama. Uyilo oluqhelekileyo lwekhitshi kunye nolwakhiwo lubandakanya umsebenzi kunye nesitayile sokulungiselela ukutya, ukupheka kunye nokonwabisa. I-chic yokutya ekhitshini eqinisekisiweyo yokuphucula izivamvo zakho.
Iirves eziluncedo nezintle ngombala obomvu omnandi zibonelela ngendawo yokugcina enesitayile. Iingqameko zekhabhathi zekhonkco zenza into esebenzayo kunye nomlinganiswa. Iphaneli yekhabhathi ethe tyaba ekugqityweni kwe-matte inesitayile kangangokuba kukude kude nokugqitywa kwesiqhelo okuphezulu, kodwa kusabonakala ngathi kuyimodareyitha. Ibha ephakanyisiweyo, imiphezulu yeetafile emhlophe eqinileyo. Umphezulu wokupheka owakhelweyo, izibambo zokutsala i-nickel, izixhobo zombane ezingenasici kunye neethoni eziphakathi zethayile zodaka zizinto ezifanelekileyo kwesi sikimu yoyilo.
Esi siqithi sikhulu sekhitshi sisebenza njengendawo yokulungiselela, yokupheka kunye neyokutya. I-countertop yomgangatho oqinileyo omhlophe kunye nekhabhathi engenasiphatho engenaziphatho kwisiphelo esineglasi ephezulu yenza ikhitshi efanelekileyo kunye neyala maxesha enemisebenzi yoyilo oluphezulu. Amagqabantshintshi eBold abomvu yeyona ndlela ifanelekileyo yokongeza umbala kunye nomlinganiswa kwesi sikimu soyilo lwekhitshi.
Ikhitshi yintliziyo yekhaya; Kulapho iinkumbulo ezimnandi zokuba kunye kunye nokwabelana ngesidlo esimnandi sasekhaya. Uphefumlelwe yimfudumalo nothando, eli gazi libomvu lenkundla yekhabhathi ekugqityweni kwe-matte ilungele ukudala inkangeleko yanamhlanje kwaye akukaze kubonakale ngathi kungumhla. Ngokuyidibanisa nomthi wokugqiba i-laminate, yongeza ibhalansi kwaye yakha uphawu kwisitayile yoyilo.
Ubuhle obulula kunye nesitayile. Ngokusebenzisa iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe ezithe tyaba ezenziwe ngentsimbi engenamthungo kunye nezixhobo ezomeleleyo zoxinzelelo oluphezulu ezifikelela kwikhawuntara yesiqithi se bar; olu hlobo loyilo luphuma luye kwiskimu esihamba kunye nesimodareyitha. Udonga lwe-aksenti ebomvu lenza ingxelo ngokuyidibanisa nomgangatho ongwevu.
Iikhabhathi ezimbini ezibomvu nezimnyama ezixhonyiweyo zekhabethe enendawo emhlophe yokuma komphezulu, udonga olubomvu nolumhlophe kunye nodonga olwenziwe ngokwezifiso lodonga oluxhomekeke kwiipaneli zekhabinethi zezona zinto ziphambili zale khitshi yesitayile se-eclectic. Izixhobo zangoku kunye nezixhobo zongeza ibhalansi kwisikimu yoyilo. Ukuzonwabisa, ukupholisa kunye nokuzonwabisa ngemibono yokulungiswa kwekhitshi yakho elandelayo.
Ngokwesiqhelo, ukuba usebenzisa iikhabhathi zeethoni ezimbini-iikhabhathi ezinemibala ekhanyayo kufuneka zibe ngaphezulu kwaye iithowuni ezimnyama kufuneka zibe sezantsi ukuzalisa isithuba. Kolu luyilo lwekhitshi olumile u-U, qaphela ukuba iikhabhathi ezisisiseko zikumgangatho ophakamileyo omenyezelayo we-lacquer ngombala wekhrim kwaye udonga lwesandi lubhalwe ngombala wewayini ebomvu ebomvu. Oku kuyahlawulwa ngokubandakanya ikhabhathi yekhawuntari ende yezixhobo; ukupeyinta udonga ngendawo esinki-emhlophe kunye nokufaka iithayile eziphakathi.
Oku kukhazimla okubomvu okuqaqambileyo okuphezulu okugqamileyo okugqityiweyo ukugqiba iikhabhathi zasekhitshini kunye nezihlalo zebar ezimile phakathi komqolo wephepha elimhlophe eliseludongeni, ipeyinti enombala we-ceramic tile emva kokutshiza kunye nomgangatho omhlophe wethayile.
Ezinye zezona zimvo zibalaseleyo zekhitshi ebomvu zamkela ngokupheleleyo umbala kwaye ziwenze ube ngumtsalane ophambili. Thatha inkuthazo kule khawuntara yebar bar usebenzisa i-gloss laminate ephezulu ngombala obomvu wetumato, evumela indawo ezahlukeneyo zokusebenza ukuba zichazwe. Ibha yesiqithi ngokubonakalayo yahlula indawo yekhitshi kwezinye iindawo zendlu kwaye ibonelela ngendawo ekugxilwe kuyo.
Amakhitshi aMnyama eKhabhinethi - Iikhitshi ezineeKhabhathi eziMnyama - Uyilo lwale Khitshi lwanamhlanje - Izimvo zeSiqithi seKhitshi
yintoni ukufumana umfana wam kwisikhumbuzo sethu
Isipho seminyaka eli-18 somtshato
Iphepha elinamaphepha ligcina imihla
Isango lendlela yokuhamba
Iiflethi zeendlovu zeballet zomtshato